Taageerada Maskaxeed - Xayawaanku waa mid ka mid ah kaalmooyinkaaga ugu fiican | Bezzia
Xayawaanka sida mid ka mid ah taageerooyinka nafsiga ah ee weyn
Susana godoy | 10/10/2021 18:00 | Cilmi-nafsiga
Iyagu waa halyeeyada weyn ee nolosheena laakiin sidoo kale caafimaadkeena. Sababtoo ah xayawaanku waxay noqdeen mid ka mid ah taageerooyinka nafsaaniga ah ee badan sababo kala duwan awgood. Marka, way ku habboon tahay inaad taqaan iyaga, maxaa yeelay haddii aadan weli haysan xoolo agagaarkaaga ah, waa waqtigii
Qaadashada xayawaanku waxay noqon doontaa mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee aad noloshaada ku samayn doonto. Kaliya maahan inaad siiso guri iyo kalgacal aan shuruud lahayn laakiin maxaa yeelay waxay kuugu soo celin doontaa siyaabo kale oo badan. Waa waqtigii la ogaan lahaa sababta ay u noqdeen taageerooyinka nafsaaniga ah ee aan aad u xusno.
1 Dhiirigelinta in guriga laga tago
2 Xayawaanka ayaa na siiya shirkad weyn
3 Taageerada cilmi-nafsiga: Waxay kor u qaadaan isku-kalsoonaanta
4 Waxay naga caawiyaan inaan masuuliyad qaadno
5 Waxay yareysaa buufiska
6 Waxaan dareemeynaa ammaan badan
Dhiirigelinta in guriga laga tago
Markaan marayno meel xun, sababo kala duwan awgood, way nagu adag tahay inaan ka baxno guriga. Dawladaha walaaca ama xitaa niyad -jabka ayaa nolosheena ka soo bixi kara digniin la'aan. Sidaa darteed, waa run in ay jiraan daaweyn taxane ah inta aan nafteena gelinno gacanta takhasusayaasha. Laakiin dhinaca kale, xayawaanku waxay noqon doonaan mid ka mid ah taageerooyinka nafsaaniga ah ee weyn. Sababtoo ah adiga ayaa leh mas'uuliyad iyaga, waxay u baahan yihiin inay ka baxaan guriga, ay qaadaan tallaabooyinkooda oo ay naftooda iska yareeyaan. Tani waxay kugu dhiirigelinaysaa inaad naftaada hawada geliso xitaa marka aysan badin guusha.
Xayawaanka ayaa na siiya shirkad weyn
Mid kale oo ka mid ah dareenka aan qofna dareemayn waa kalinimada. Sababtoo ah tani waxay qofka ka dhigaysaa mid nafsi ahaan u burbura, oo ay qaado niyadda, taas oo noqon karta kicin dilaa ah. Sidaa darteed, xayawaanku waxay u joogi doonaan inay caawiyaan marka ay aad ugu baahan yihiin. Iskusoo wada duuboo, markaan weyno qof oo aan ubaahano taageero, waxba uma eka xayawaanka leh jacayl aan xad lahayn., taas oo aan ku arki doonno indhahooda iyo tilmaantooda, si ay xoogaa yar kor ugu qaadaan niyadayada, oo na kor uga qaadaan ceelkaas oo aan mararka qaarkood dareemo.
Taageerada cilmi-nafsiga: Waxay kor u qaadaan isku-kalsoonaanta
Waa maxay sababta isku-kalsoonidu aad muhiim ugu tahay? Sababtoo ah waxay doorbideysaa niyadda wanaagsan iyo dabcan, fayoobaanta guud. Wax aasaas u ah maalin kasta laakiin sidoo kale, si ay u awoodaan inay gaaraan wax kasta oo aan soo jeedino. Laakiin mararka qaarkood sidaas uma sahlana in aad nala joogto. Hadda xayawaanku waxay gacan ka geysan doonaan sidii hore oo kale, maxaa yeelay waxaan arki doonnaa shaqada la qabtay waxaanan ku dareemi doonnaa wanaag ku saabsan daryeelka xoolahayaga. Kaas oo nagu hoggaamiya inaan nafteena wax yar qiimeyno.
Waxay naga caawiyaan inaan masuuliyad qaadno
Marna ma naqaanno waxa run ahaantii na anfaca illaa aan horteenna ka helno. Sidaa darteed, mas'uuliyadda awood u lahaanshaha xayawaan waa in la tixgeliyaa, maxaa yeelay runtii waxay na caawin doontaa maalin kasta. Waxaad mar walba dareemi doontaa inaad ku lug leedahay hawshaas oo kale, saaxiibtinimo iyo jacayl aan xad lahayn. Waxaan awoodi doonnaa inaan yeelano rabitaan taasina waxay mas'uuliyadda ka dhigeysaa mid sii weyn. Waa maxay ujeedada waxan oo dhan? Dareen fiican iyo waxaan ka gaari doonaa min daqiiqada koowaad. Sababtoo ah mahadsanid xayawaan rabaayad ah, waxaan ogaan doonnaa dareenno cusub oo aanan xitaa ogeyn.
Waxay yareysaa buufiska
Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee aan maanta ka heli karno nolosha waa walaaca. Tan waxaa lagu bixiyaa laxanka nolosha aan hoggaaminno, in aan awoodin inaan wax walba gaarno waxay na dareensiisaa cabbur. Laakiin haysashada xayawaan dhinaceena ah ayaa naga dhigi doonta inaan u aragno si ka duwan. Markaa shirkaddaada oo keliya ayaa naga dhigaysa mid awood u leh inaan ka baxno cudurkan oo kale oo aan ka dhigno a gargaarka ama soo kabashada dadka qaba niyad -jabka.
Waxaan dareemeynaa ammaan badan
Waxaan dhihi karnaa qeybtaan waxay la mid tahay soo koobid dhammaan kuwii hore oo dhan, ama inta badan. Sababtoo ah iyaga ayaanu dareemeynaa inaan la soconno, marka lagu daro nasashada maxaa yeelay waxay baabi'iyaan walaaca, sidoo kale waxay na dareensiin doonaan inaan mar walba ammaan nahay. Waxaan leenahay shirkad kaamil ah tanina waxay naga dhigaysaa inaan u malayno inaysan wax xun nagu dhicin. Sidaa darteed, wax walba ayaa ugu faa'iidada badan nolosheena, haa, laakiin sidoo kale caafimaadka shucuurteena.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Cilmu-nafsiga iyo lamaanaha » Cilmi-nafsiga » Xayawaanka sida mid ka mid ah taageerooyinka nafsiga ah ee weyn
Talooyin wax ku ool ah oo lagu qariyo bidaarta oo ay tahay inaad ogaato
Bariis maraq leh khudaarta dayrta iyo boqoshaada